ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်းနှင့် MCG ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း ( Vocational Training for Youth) ဖွင့်‌လှစ်‌
ယ‌နေ့ ‌နေ့လည်‌ ၃း၀၀ နာရီက ဗြဟ္မစိုရ်‌လူမှုကူညီ‌ရေးအသင်း ပညာဒါန‌ကျောင်းတွင်‌ဖွင့်‌ပွဲအခမ်းအနား
ကျင်းပရာ မန္တ‌လေးတိုင်း‌ဒေသကြီး လွှတ်‌‌တော်‌ဒု ဥက္ကဌ Dr. ခင်‌‌မောင်‌‌ဌေး၊ချမ်းမြသာစည်‌
မြို့နယ်‌ တိုင်း‌ဒေသကြီးလွှတ်‌‌တော်‌ကိုယ်‌စားလည်‌ဦးမြင့်‌‌အောင်‌မြို့ MCCIဒါရိုက်‌တာ
ဦးဟန်‌စိုး၊ဗြဟ္မစိုရ်‌လူမှုကူညီ‌ရေးအသင်း ဒုဥက္ကဌ ဦးချစ်‌ထူးနှင့်‌တာဝန်‌ရှိသူများ၊ MCG
ကုမ္ပဏီမှ မန်‌‌နေဂျင်းဒါရိုက်‌တာ ‌ဒေါ်နှင်းပွင့်‌ဖြူနှင့်‌တာဝန်‌ရှိသူများ၊ အထူးဖိတ်‌ကြားထားသည့်‌ဧည့်‌သည်‌‌တော်‌များနှင့်‌သင်‌တန်းသူ/သား ၆၀ ‌ကျော်‌တက်‌‌ရောက်‌ကြသည်‌။
အခမ်းအနားတွင်‌ ဗြဟ္မစိုရ်‌အသင်းမှ ဒု ဥက္ကဌ ဦးချစ်‌ထူးက အသင်းကြီးမှ‌ဆောင်‌ရွက်‌လျှက်‌ရှိ‌သော လုပ်‌ငန်းများအ‌ကြောင်းနှင့်‌အနာဂါတ်‌လူငယ်‌များ
မန်‌‌နေဂျင်းဒါရိုက်‌တာ ‌ဒေါ်‌နှင်းပွင့့်‌ဖြူက MCG မှ‌ဆောင်‌ရွက်‌ထားရှိမှုများနင့်‌ယခုသင်‌ကြားမည့်‌သင်‌တန်းအ‌ကြောင်း မိတ်‌ဆက်‌စကား‌ပြောကြားသည်‌။
ထို့‌နောက်‌ MD ‌ဒေါ်နှင်းပွင့်‌ဖြူက အသင်းအတွက်‌အလှူ‌ငွေ ၃၀၀၀၀၀ ကျပ်‌ လှူဒါန်းရာ
အလုပ်‌အမှု‌ဆောင်‌ဦးလှ‌ဆောင်‌ကလက်‌ခံရယူ၍ဂုဏ်‌ပြုမှတ်‌တမ်းလွှာပြန်‌လည်‌‌ပေးအပ်‌ကာ အခမ်းအနားကိုရုပ်‌သိမ်းပြီး သင်‌တန်း ကိုဆက်‌လက်‌သင်‌ကြား‌ကြောင်းသိရှိရသည်‌။
2. Managing the Job
8. Positive Attitude စသည့် ဘာသာရပ်များပါဝင်မှာ ဖြစ်သည်‌။
သင်တန်းကာလ ၁လခွဲကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး ၁ပတ်လျှင် တနင်္လာမှ ကြာသပတေးနေ့အထိ (၄)ရက်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါသည်‌။ သင်တန်းပြီးဆုံးလျှင် Certificate ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး MCG အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ကုမ္ပဏီမှ
Time : 07:19 (am)